सरिता गिरीले यसरी गरिन एक दर्जन पुरुषसँग बिहे ! ग्राहक हुन कि दुलाहा – Complete Nepali News Portal
सरिता गिरीले यसरी गरिन एक दर्जन पुरुषसँग बिहे ! ग्राहक हुन कि दुलाहा
April 6, 2017	1,311 Views
काठमान्डाै – पेशा पनि कस्तो । बिहे गर्ने, पैसा माग्ने, नदिए मुद्धा हाल्ने । प्रतिविवाहको दर हो १२ देखि १५ लाख । यस्तो गरेर एउटी युवतीले अहिलेसम्म सात वटा ग्राहक (दुलाहा) बाट असुली गरिसकिन् । रमाइलो कुरा छ कि, काठमाण्डुको कुनै मन्दिर बाँकी छैन, विवाह गर्नका लागि । अब त उनलाई देख्नेबित्तिकै पुराजी पनि चकित खान्छन् ।